OEM Maro adag xoojiyay FRP GRP warshad shabagyada iyo saarayaasha | Weijia
Fiberglass-ka la xoojiyay balaastig (magac gaaban FRP / GRP) guddi shabag. Cabirka caadiga ah 30x38x38mm ama 38x38x38mm. Midabku wuxuu bixiyaa jaalle, cagaar, cawl, madow, casaan Max weyn: 4: x 12 ′
Xargaha shaashadda FRP waxaa badanaa loo isticmaalaa sidii madal lagu socdo, kumbuyuutarrada waxaan ku siinnaa cusbada Vinyl Ester, cusbada ISO (isophthalic) iyo cusbada o-phthali (Orthophthalic). Shaandhayn frp iyo shabaggeedii frp labadaba waa la heli karaa!
Astaamaha waa sida soo socota:
Waxay leedahay iska caabin acid aad u fiican, caabbinta alkali, dareeraha dabiiciga iyo milixda iska caabinta; guryaha gaaska iyo dareeraha daxalka, waxayna leedahay ka-sarreyn aan la barbardhigi karin berrinka ka-hortagga daxalka.
Marka loo eego shuruudaha munaasabadaha isticmaalka dhabta ah, o-phthalic, isophthalic, iyo vinyl resins ayaa dhaqaale ahaan loogu dooran karaa inay yihiin maadada matrixka.
Miisaan khafiif ah, xoog sare, oo si fudud loo jaro loona rakibo
Maaddaama ay ka kooban tahay cusbada iyo fijarka dhalada, cufnaantiisa ayaa ka yar 2 kiilo mitir kuubil, kaliya 1/4 bir ah, 2/3 aluminium ah. Awooddiisu waa 10 jeer tan PVC adag, xooggeeduna wuxuu ka sarreeyaa kan aluminium iyo bir caadi ah. Miisaankiisa fudud wuxuu si weyn u yareyn karaa taageerada aasaasiga, taas oo yareynaysa qiimaha maaddada ee mashruuca.
Goyntiisa iyo rakibideedu waa sahlan yihiin, waxaa loo baahan yahay xoogaa yar oo qalabka shaqada iyo korontada ah, taas oo si weyn u yareyneysa qiimaha rakibaadda. Anti-gabowga, nolosha adeeggu waa in ka badan 20 sano.
Daah olol. Heerka faafitaanka ololka ee xajmiga ololka-celiya (ASTM E-84) kama badna 25; heerka faafida ololka ee cilad-darrada vinyl-ka ee holaca ah kama badna 10. Xaddiga ogsijiinku kama yaraan 28 (GB 8924).
Waxay leedahay dahaadh koronto oo aad u fiican oo aan burburin ka yar 10KV danab; ma laha astaamo elektromagnetic waxaana loo isticmaali karaa qalabka xasaasiga u ah magnetically; qaabdhismeedka gaarka ah ee muraayadda fijigga ah ee la xoojiyay weelka caagga ah ayaa sidoo kale leh astaamaha ka-hortagga is-daba-marinta iyo daal-ka-hortagga
Midabka si macquul ah ayaa loo dooran karaa. Midabka waa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha. Guud ahaan, midabada gunooyinka FRP waa: jaalle, madow, cawl, cagaar, buluug, casaan, iyo hufnaan ama tarjumaad. Inta lagu jiro isticmaalka, hal midab ayaa loo isticmaali karaa kali ama isku dhafan.
Awood-qaabeyn xoog leh Cabbirka waa mid jajaban oo kala jaad ah, si fudud loo jaro, oo cabirkiisu deggan yahay
Hore: Anti skid daloolin Birta Aluminium xajin Strut
Xiga: 3D xayndaabka mesh silig welded
Frp Grp shabaggeeda
Frp Mesh shabaggeeda
Frp Qaloobay Mahadsanid
Frp Walkway shabaggeeda
Shaashadda Fiber Glass
Grp Gogosha shabaggeedii
Pultruded Frp shabaggeeda
Solar grid FRP shabaggeedii catwalk socodka
Fiberglass grp panels frp shabaggeedii sagxadda dhulka